Nhau - Musiyano uripo pakati pe dumbbell squat uye barbell squat
Nekufambira mberi kwenzanga, pfungwa dzevanhu dzekunaka dziri kuramba dzichichinja. Kwenguva yakareba, iwo aesthetic zviyero zveutete sekunaka kwakafashukirwa. Zvishoma nezvishoma, vanhu havachateedzere zvakanyanya kuonda, asi vanonyanya kutarisisa hutano. dambudziko. Mazuva ano, kugwinya kuri kuramba kuchikurumbira. Vanhu vanogona kushandisa kugwinya kuzadzisa chinangwa chekusimbisa iwo muviri wavo uye kuumba iwo akakwana muviri chimiro. Mukuita kwekugwinya, squat iri yakasarudzika kufamba. Saka, ndeupi musiyano uripo pakati pe dumbbell squat uye barbell squat?
Midziyo yekudzidzisa yakasiyana
Kunyangwe ivo vese vachiita squats, zvishandiso zvinoshandiswa zvakasiyana, mhedzisiro yacho ichave yakanyatsosiyana. Dumbbell squats uye barbell squats vanoshandisa zvakasiyana zvakasiyana zvekudzidzisa michina. Musiyano uripo pakati pemabhero uye mabhero achiri makuru kwazvo, uye chimiro chevaviri chakasiyana zvachose. Kunyanya maererano nehuremu, huremu hwema dumbbells idiki. Mujimu yakajairika, dumbbell inorema ingori chete nezve 60 kg. Kurema kweye barbells kwakakura kwazvo, kusanganisira 250 kg, 600 kg, uye 1000 kg.
Mutoro wakasiyana wekudzidzisa
Dumbbell squats kudzidziswa uremu nerubatsiro rwezvimedu, izvo zvinogona kuita kuti squats ibudirire. Inofananidzwa nebarbell squats, dumbbell squats akareruka zvakanyanya. Kunyanya kune varairidzi vakatokwanisa kuita squats, kana iwe uchida kuenda kumberi, unogona kutanga ne dumbbell squats. Kunyangwe kana iwe usingakwanise kutakura huremu hwemakomba, iwe haufanire kunetseka nezve kuchengetedzeka nyaya, ingo zviwisira pasi Iyo barbell squat ine njodzi uye inoda rubatsiro rwemidziyo yakakosha kana vanochengeta.
Vakasiyana vanoshanda vanhu
Iyo barbell squat inorema zvakanyanya kupfuura iyo dumbbell kudzika, uye iyo yakasikwa mhedzisiro inonyanya kuzivikanwa. Kana iye mudzidzisi achingoda kuti yake mitsara iwedzere kunakisa uye kutsetseka, uye asingateedzere mhasuru kunzwa, saka dumbbell squats inogona kuzadzikisa kudiwa. Kana mudzidzisi achida kuzadzisa imwe mhasuru yekudzidzira mhedzisiro, zvinodikanwa kushandisa bharbell kuita squats. Naizvozvo, dumbbell squats uye barbell squats inokodzera vanhu vakasiyana. Ndeipi yaunosarudza zvinoenderana nezvako zvaunoda.